Vakwegura Shelf Corporation FAQs
Chii chinonzi Makambani Akaunganidzwa masherufu kambani?
Ndeapi marudzi emakambani esherufu?
Ndeapi masherufu kambani zera rakandinakira? Chii chinoitwa nesherefu kambani zera
Kuwedzera masherufu kambani mabhenefiti?
Chii chinonzi Shell Kambani kana Corporate
Yakawedzera Webhusaiti Zvikamu Uye Ruzivo
Sherefu kambani iri LLC kana mubatanidzwa iyo yakaumbwa pane yekutanga
zuva. Kazhinji, inenge isina kuita bhizinesi. Iyo haina kubata
midziyo, haina kuita chikwereti uye haisati yaburitsa stock. Izvi
makambani anonziwo semakambani emashefu ane mwaka. Rini
iwe unotenga Kambani Inosanganisirwa chembere masherufu kambani, ichaita
svika mumaoko ako nezvinyorwa zvekubatanidza faira zvakadhindwa
nehurumende nezuva rayo rekubatanidzwa pamwe ne:
"Chiito cheSole Incorporator" gwaro rinoendesa kambani
Maminitsi emisangano (isina chinhu mafomu emhando)
Kambani yemubatanidzwa (rekodhi bhuku)
Masitifiketi emasheya (asina chinhu, asina-kupihwa masheya)
Corporate Bylaws (mafomu asina kunyorwa)
Yekutarisa yekambani ichikuzivisa iwe zvinhu zvekuchengeta yako kambani
Kunyoreswa mumiririri sevhisi
CD ine mafomu akakosha
Federal Mutero ID Nhamba
Mamwe magwaro akakosha
Dzokera kuShelf Corporation
Ndeapi marudzi emakambani esherufu akwegura?
Sirifu nemakambani akwegura anokwanisa kureva kune akasiyana marudzi epamutemo masangano. Izvi
inosanganisira makambani epamba eUS uye ma LLC, pamwe nekumahombekombe uye
masangano epasi rese. Izwi rekuti "shefu" kana "akura" rinongoreva iyo
chokwadi chekuti kambani yatomirirwa kare uye yakagara "pane
shefu ”inomirira kutengwa.
Kudzokera kuShelf Kambani
Ndeapi masherufu kambani zera rakandinakira?
Izvo zvakakosha kuti usarudze zera rakakodzera kune zvaunoda. Kune a
kontrakta yekuvaka kana kambani inobvunza huwandu hwemakore mu
kuvapo kwakakosha kune vatengi. Kana iwe wave uri muindasitiri yekuvaka kwemakore gumi nemashanu, semuenzaniso, kuwana yegumi neshanu-gore kambani zvinogona kuita zvine musoro nekuti zvinoenderana nenguva yako mubhizinesi. Kuti uwane mamwe makondirakiti, akajairwa makore ebhizinesi anodikanwa makore maviri. Izvo zvinogona kunge zvisiri izvo zvega zvekuwana chibvumirano chekubhidha, asi chingave chimwe chezvinhu zvakawanda zvekutarisa-mubhokisi, kunyanya, sezvatakataura, kana zera rako rekambani uye zera rebhizinesi zvichitenderana. Uyezve, vamwe vanotaura kuti kune
bhizinesi rinoda kuvaka kiredhiti kiredhiti, akura ari nani. Izvi zvinogona kana zvakawanda kusave zvakadaro, asi kune zvimwe zvinhu zvingangove zvine huremu hwakawanda sekubatsira kwebhizimusi uye kukweretesa. Kuzivisa kwakazara kunokurudzirwa. Nyaya dzakakosha ndidzo pfungwa dzevangangodaro vatengi uye
vangango mukweretesa. Bhizimisi rinofanira kunge riine makore mangani kugombedzera iyo
mutengi kana mubhangi kuti bhizinesi rakachengeteka uye rakatsiga? Zera racho
rako rebhizimisi rakakosha? Zvinowanzoitirwa mutengi kana mukweretesi. Hatisi kureva kuti zera ndiro rega chinhu pano asi zvinogona kuisa huremu padivi rako rechikero, kuwedzera kune zvimwe zvakakosha zvinhu.
Zvinorevei kuti pasherefu kambani zera rinorevei?
Zera resherufu mubatanidzwa rakangoita chaizvo sezera remunhu
kuva. Mutemo unodaidza mubatanidzwa munhu. Icho chakagadzirwa
munhu. Yakaparadzaniswa nevanhu varidzi. Varidzi ve
pasherufu mubatanidzwa, sekune chero rimwe sangano repamutemo, rakangosiyana
kubva kune mumwe nemumwe sevanhu vaviri vakaparadzana. Iyo HJ Heinz kambani
yakatanga muna 1869. Varidzi vepakutanga, maofficial nevatungamiriri vane yakareba
kubvira zvapfuura. Zvisinei, zera rekambani rinoramba riripo
Ikozvino kuwanikwa - Iyo kambani yakaumbwa yakagadzirira kutumirwa
zvekuendeswa nechimbichimbi pane kuda kumirira hurumende
Kuvimbika kune vatengi (Izvi zvinoshanda zvakanyanya, mumaonero edu, kana nguva yako chaiyo mubhizinesi ichienderana nezera rekambani.)
Zvinogoneka Kuwedzera kugona kubhidha pazvibvumirano. Zvibvumirano zvakawanda zvekubhidha zvinoda kuti bhizinesi riite pakati pezviviri kusvika zvishanu
makore. Izvi zvinonyanya kushanda kana nguva yako chaiyo mubhizinesi ichienderana nezera rekambani.
Kukurumidza kuwana chikwereti (nekuti iyo kambani inopinda mumaoko ako nekukurumidza)
Kurumidza kuwana capital capital (nekuti iyo kambani inopinda mumaoko ako nekukurumidza)
Inokurumidza kutora kambani "yeruzhinji" uye kutengesa masheya pane stock
chinjana kana imwe nzira yakasangana, senge yakakodzera mamiriro uye federal mafirita.
Pasina kutungamira nguva yekuisa yako kambani
Zvichida zvinowedzera kugona kubhidha kana kuburitsa bhizinesi rako munhandare mune mukwikwidzi
makambani anofanirwa kubhururuka hurefu hwehupenyu huripo
Pakarepo kuwana kambani ine kufaira kwenguva refu
Kukurumidza kuwana mikana yebhizinesi
Aya mabhenefiti ari pamusoro akavakirwa pamaonero edu chete uye anogona kusashanda kune ako mamiriro. Vatengi vemakambani esherefu vane zvimwe zvakanaka zvakakura kupfuura zvichangoburwa
akaisa mabhizinesi. Kutanga, mabhenefiti ataurwa pamusoro. Ipapo, iyo
mukana wekukwanisa kutenga yakamisikidzwa mubatanidzwa uye zvakadaro
kuzviisa mukati sevakuru, vatungamiriri uye vagovani, uchivapa
kudzora kwekukurumidza kwebhizinesi. Tinokurudzira kuburitswa kwakazara pakuti iwe unoudza vanopa mari uye mamwe mapato kuti uchangobva kuwana sangano rakura.
Chii chinonzi shell mubatanidzwa kana mubatanidzwa goko?
Mabhokisi emakambani i "makambani esherefu," sekuzivikanwa kwawo, izvo
ndiwo zvakare makambani akatoumbwa. Aya marudzi e
makambani kazhinji haana vagovani vemasheya, vakuru kana vatungamiriri
(kunze kwekunge ichida kuiswa kuti uchengetedze kumira kwakanaka). Kazhinji
hauna midziyo kana zvikwereti. Chinhu chakadai chakafanana nechitsva
imba yakavakwa uye yakagadzirira kuti ugare.